Shina Inona no atao hoe COVID-19 ary ahoana no hisorohana izany? mpanamboatra sy mpamatsy | Chang Liang
Ny COVID-19 (Corona Virus Disease 2019), fantatra ihany koa amin'ny hoe "COVID-19", dia nomen'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana ho "aretin'ny coronavirus 2019"  , manondro ny pnemonia vokatry ny otrikaretina vaovao coronavirus 2019.
Tamin'ny 11 Febroary 2020, ny tale jeneralin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus dia nanambara tany Genève, Soisa fa nomena anarana hoe "COVID-19" ny pnemonia coronavirus vaovao. Tamin'ny 22 Febroary, namoaka filazana ny NHC nanavao ny anarana anglisy hoe COVID-19 ho “COVID-19″. Tamin'ny 11 martsa, nanapa-kevitra ny OMS fa ny fihanaky ny COVID-19 amin'izao fotoana izao dia azo antsoina hoe areti-mifindra manerantany.
Araka ny angon-drakitra efa misy, ny tena fisehoan'ny COVID-19 dia ny tazo, ny kohaka maina ary ny havizanana, ary ny marary vitsivitsy dia manana soritr'aretin'ny taovam-pisefoana ambony sy ny fandevonan-kanina toy ny fitohanana ny orona, ny orona ary ny aretim-pivalanana. Ny ankamaroan'ny tranga mahery vaika dia voan'ny dyspnea herinandro taty aoriana, ary ny tranga mahery vaika dia nandroso haingana tamin'ny aretin'ny taovam-pisefoana mahery vaika, fahatafintohinana septika, asidra metabolika refractory, coagulopathy ary tsy fahombiazan'ny taova maro. Tsara ny manamarika fa ny marary mafy sy marary mafy dia mety manana tazo antonony ka hatramin'ny ambany mandritra ny aretina, na tsy misy tazo mazava. Ny marary malemy dia tsy misy afa-tsy tazo kely sy havizanana kely, tsy misy pnemonia. Ny ankamaroan'ny marary dia manana vinavina tsara ary vitsy no ao anatin'ny toe-javatra sarotra. Ratsy kokoa ny faminaniany ho an'ny zokiolona sy ireo manana aretina mitaiza. Ny ankizy dia manana soritr'aretina somary malemy.
Ny fiparitahan'ny Coronavirus Vaovao dia betsaka kokoa, fifindran'ny droplet, fifindran'ny fifandraisana, ny hafainganam-pandehan'ny fifindran'ny olombelona dia tena haingana, ny ankamaroan'ny olona manana tsimatimanota ambany dia ho voan'ny aretina. Taorian'ny faha-45 taonany dia betsaka ny olona voan'ny aretina. Ny angon-drakitra farany momba ny angon-drakitra momba ny fahafatesan'ny pnemonia dia mampiseho ihany koa fa manana aretina mitaiza maro ireo olona ireo alohan'ny hahafatesana, ary mbola ambany kokoa ny rafi-kery fanefitra amin'ny vatana rehefa voan'ny Coronavirus Vaovao izy ireo. Avy eo ny tsy fahombiazan'ny taova sy ny fahafatesana.
Ho an'ny vahoaka amin'ny ankapobeny, tokony hojerentsika ny asa fisorohana. Ny fampiasana fitaovana fanariana tontolo iainana dia misoroka tsara ny otrikaretina ateraky ny COVID-19. Noho izany, amin'izao toe-javatra misy areti-mifindra mahery vaika izao, dia tena zava-dehibe ny vokatray. Tena ilaina ny mampiasa ny sakafo fanarianay ho fiarovana ny ainao sy ny fianakavianao. Ankoatr'izay, ny vokatray dia manana safidy maro ary azo amboarina araka izay ilainao.